नुवाकोट तारकेश्वरका एम.आर.शि. सुशान्त तामाङ सांगीतिक क्षेत्रमा जम्दै
काठमाडौं । विवाह, भोजभतेर तथा कुनै समारोह, पार्टीमा जाँदा तपाई कस्तो गीत सुन्न रुचाउनु हुन्छ ? पक्कै पनि रिमिक्स्, हाहाहुहु होला । त्यो पनि हिन्दी, नेपाली, या अंग्रजी । तर कहिल्यै आफ्नै भाषाका गीतमा यस्तो समारोहमा नाच्नुभएको छ । सायद कसैले होला त, कसैले नहोला ।
यस्तै किसिमका गीतसंगीतहरु त्यो पनि आफ्नै भाषामा गाउन माहिर छन्, तारकेश्वर गाउँपालिकाका एम.आर.शि. सुशान्त तामाङ । वि.सं. २०४३ सालमा बुबा हितमान तामाङ र आमा सुकुमाया तामाङको कोखबाट जन्मेका उनले आफ्नो छाप धादिङ, नुवाकोट, रसुवामा त बनाइसकेका छन् । अब विस्तारै काठमाडौंमा बन्ने उनको विश्वास छ । कक्षा १० सम्मको अध्ययन गरेका उनले गीतसंगीतमात्र नभई अरु पनि विभिन्न कार्यहरु गरिसकेका छन् । उनी भन्छन्, गीतसंगीत गाउनु मेरो रुचि हो, परिवार पाल्नु मेरो धर्म हो । उनको दुई भाइ र एक बहिनी छिन् । उनी स्वयम् भने घरको जेठो छोरो हुन् ।
सामान्य परिवारमा हुर्केको तामाङलाई गीतहरु गाउन बच्चै बेलादेखि रहर लाग्थ्यो । कहिले खेतमा त कहिले विद्यालयमा आफैं गुनगुनाएर बस्थे उनी । पछि ठूलो हुँदै जाँदा सबैले मेरो स्वरको तारिफ गर्दै गीत गाउनको लागि उत्साहित गरे । त्यसपछि मैले पनि सुरु गरे, गीतहरु कोर्न र गाउन । विस्तारै मेरो गीतले बजार पायो । धेरैले रुचाए । अब त भिडियोहरु पनि बनिसकेको छ । यसमा मेरो आफ्नै भाइ मोडलको रुपमा खेलेका छन् । उनी थप्छन्, मलाई सबैको साथ र सहयोग छ ।
उनले हाउस वाइरिङ, तामाङ कपडाको समेत विजनेशमा हात हालेर आफ्नो काम गरिरहेका छन् ।